Tamarta dabaysha ee sanadka 2017 iyo saadaasha sanadka 2018 | Cusbooneysiinta Cagaaran
Tomàs Bigordà | | Awoodda dabaysha, Tamarta dib loo cusboonaysiin karo
Sannadkii la soo dhaafay, tamarta dabaysha ee sannadka 2017 ayaa ahayd tii labaad bixiyaha ee nidaamka tamarta dalkeena. 23 GW ee tamarta dabaysha ayaa soo saartay in kabadan 47 TWh, oo matalaysa 20% wadarta korantada la isticmaalay.
Tamarta dabaysha ayaa jirtay xasilloon, siinta wax ka yar ama ka yar koronto la mid ah tii 2016.
1 Awoodda dabaysha
1.1 Dabaylaha badda
2 Xaraashyada dib loo cusboonaysiin karo
3 Kala Guurka Tamarta
4 Caqabadaha mustaqbalka
Xilligan, waxaa jira in kabadan 20.000 marawaxadaha dabaysha ah oo lagu rakibay Spain, oo ku baahsan in kabadan 1.000 beerood dabaysha ah. Inta badan, waxay leeyihiin a dhaqan aad u fiican maalmaha muhiimka ah.
Sida laga soo xigtay Red Eléctrica Española (REE), diiwaanka wax soo saarka tamarta dabaysha ayaa dhacay 27-kii Diseembar, 2017, iyada oo la soo saaray 330 GWh, oo ahayd tikniyoolajiyaddii ugu horreysay jiilka isku dhafan, oo leh baahi koronto oo ah 47%.
Xaqiiqdii, Diseembar 2017 waxay ku dhammaatay inay noqoto bisha Diseembar oo leh jiil badan awoodda dabaysha ee taariikhda.
La'aanta tabarucan tamarta dabaysha bishii Diseembar ee la soo dhaafay, celceliska qiimaha suuqa korontada wuxuu noqon lahaa ilaa € 20 / MWh ka sarreeya, marka sii kordhaya jiilka dabaysha waxay ka dhigan tahay badbaadin 30-35% marka loo eego sanadkii hore (Qiyaastii million 400 milyan)
Intaa waxaa dheer, waxaa jira 210 warshadood oo ku baahsan juqraafiga Isbaanishka, taasoo Spain ka dhigeysa kaalinta afaraad ee soosaarayaasha adduunka. Nasiib darrose waxaa ugu wacan amarro ka soo baxay Xisbiga Caanka ah, xarumahan waxay u hibeeyeen dhamaan howlahooda dhoofinta.
Tan iyo sanadkii hore, warshadaha dabaysha Isbaanishka waxay ku sii kordhayeen suuqa dabaysha ee badda. Laga soo bilaabo Farsamada Teknolojiyada ee Qeybta Awoodda Dabaysha Isbaanishka, REOLTEC, cilmi-baarista, horumarka iyo wax-soo-saarka hal-abuurka ah ayaa la isku-dubariday oo la isku-dubbariday oo ka jawaabaya baahi qaybta dabaysha Isbaanishka. Sannadkii 2017, wadashaqeynta R & D & i ee udhaxeysa qaybaha bulshada iyo ganacsiyada ee suuq aad u tartan badan ayaa kordhay, taas oo u fududeyneysa warshadaha dabaysha Isbaanishka booskooda dabaysha badda ka baxsan.
Si loo waafajiyo awaamiirta yurub, dowladdu waxay sameysay 3 xaraash oo la cusboonaysiin karo ah, laba ka mid ah 2017 iyo midna sanadka 2016. Kuwaasi waxay si weyn kor ugu qaadeen waaxda dabaysha Isbaanishka sanadihii ugu dambeeyay oo kaliya 65 MW oo dabaysha ay ahayd rakibay.
Kala Guurka Tamarta
Si loo daboolo caqabadda qorshaynta kala-guurka tamarta, AEE ayaa diyaariyey falanqeyn ururinaysa booska waaxda ee ku saabsan sameynta Sharciga Isbedelka Cimilada iyo Kala-guurka Tamarta.
Falanqaynta ka dhalatay awgeed AEE, Awoodda dabaysha ee la rakibay 2020 waxay gaari doontaa 28.000 MW (iyadoo la tixgelinayo xaraashka cusub ee horay loo siiyay iyo qoondada dabaysha Canarian), si awoodda dabaysha ay u kororto 1.700 MW sanadkiiba celcelis ahaan inta u dhexeysa dhammaadka 2017 iyo bilowga 2020.
Tobanka sano ee soo socda waxay ku kordhin doontaa 1.200 MW sanadkiiba illaa 2030, gaadhaya 40 GW ee korantada la rakibay.
Thanks to marawaxadahaas cusub ee dabaysha ee daraasadda AEE, Qiiqa ka imanaya waaxda korantada Isbaanishka ayaa la dhimi doonaa 2020% illaa 30 marka loo eego 2005 (sanadkii tixraaca ee nidaamka ganacsiga qiiqa Yurub, ETS ee loo soo gaabiyay Ingiriis) iyo in ka badan 40% sanadka 2030.
Sida laga soo xigtay - PREPA, 100% decarbonisation waxaa lagu gaari doonaa sanadka 2040. Intaas waxaa sii dheer, isku darka korantada Isbaanishka wuxuu gaari doonaa 40% daboolida baahida loo qabo dib u cusbooneysiinta sanadka 2020, 62% 2030, 92% 2040 iyo 100% sanadka 2050.
A isku dhafka korontada dheellitiran.
Isku-dubaridka hay'adaha kala duwan oo leh karti u leh Heerka Nacional iyo iskiis u shaqeynaya tamarta.
Soo hel dheelitirka u dhexeeya dhimista kharashka korontada iyo maalgashiga mustaqbalka. Farsamooyinka waa in la helaa si xaaladdu tahay noqo mid waarasida qandaraasyada labada dhinac ee muddada-dheer ama xayndaabyada qiimaha.
Samee qaab-sharciyeed deggan oo u oggolaanaya soo jiidashada maalgelin lagama maarmaan.
Marka laga hadlayo jasiiradaha Canarian, waa lagama maarmaan in lagu sharaddeeyo tamarta dabaysha si loo yareeyo qiimaha jiilka jasiiradaha (hadda qiimuhu waa in ka badan laba jibaar marka loo eego jasiiradda, ku tiirsanaanta shidaalka).
Ujeeddooyinka ugu muhiimsan ee cilmi-baarista waxaa loogu talagalay yareynta kharashka iyo hagaajinta tayada wax soo saarka, is-dhexgalka shabakadda ee xaaladaha ugu wanaagsan ee amniga iyo kalsoonida, iyo hagaajinta habka wax soo saarka. Waxaas oo dhami waa inay noqdaan muhiim ah si loo ilaaliyo Spain hogaamiye u ah teknolojiyadda badda lana dejiyo shuruudaha lagama maarmaanka u ah hirgelinta tamarta dabaysha badda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta dabaysha ee sanadka 2017 iyo saadaasha sanadka 2018
Waxay baaraan sababta keentay shilka markab shidaalka ee Sanchi